भोक लाग्दा माटो खान्छन् टुहुरा बालिका – HKNepal.com – First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
५ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०९:१७
१० वर्षीया सविता, नौ वर्षीया सुनिता र पाँच वर्षीया र मिला एकैपरि वार का टुहुरा दिदीबहिनी हुन्। फुसले छाएको घर भत्किने अवस्थामा पुगेको छ भने खाने अन्न छैन। भोकले छटपटाउँदा उनीहरू माटो खान्छन्।
जिउमा फाटेको एकसरो लुगाबाहेक राति ओढ्ने–ओ छ्याउने थप कपडा छैन । दिउँसो घाम तापेर र राति आगो बालेर बस्ने गरेका छन् । यो कुनै चलचित्रको कथा जस्तो लाग्ने पीडा बैतडीको सिगास गाउँपालिका–८, न्वादेउका तीन जना टुहुरा दलित बालिकाको हो।
विपन्न दलित परिवारमा जन्मेका तीन दिदीबहिनी विद्यालय पनि जाँदैनन् । बुबा शालिभान नेपालीको उपचार अभावमा तीन वर्षअघि मृत्यु भयो । रो गी आमा अन्नपात माग्दै गाउँ डुल्न जान्छिन् । गाउँमा अन्नपात माग्न गएकी आमा फर्किन ढिलो भएपछि पाँच वर्षीया कान्छी छोरी र मिलाले भोक थाम्न नसक्दा माटो खाने गरेको उनकी दिदी सविता नेपालीले सुनाइन्।
दलित भएकै कारण अन्य समुदायका मानिसले बालिकालाई घरभित्र लैजान अप्ठ्यारो मान्ने गरेका छन् । कहिले काहीँ एक÷दुई गाँस खान दिए पनि सहारा दिन चाहिँ कोही अघि सरेका छैनन्।
पोहोर साल फुसले छाएको घर भत्केपछि आफ्नै पहलमा मर्मत गरि दिएको स्थानीय गोरे बोहराले बताए । कपडा सिलाएर बालबच्चा पाल्दै आएका शालिभानको मृत्युपछि परिवारको बिचल्ली भएको बोहरा बताउँछन् । जग्गा जमिन केही छैन । आमाले गाउँगाउँ डुलेर मागेको अन्नले कहिलेकाहीँ छाक टार्ने गरेका छन् । उनी पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।
Tags: टुहुरा बालिका, भोक, माटो
हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : सङ्क्रमित संख्या ८ जनामात्रै …
७० लाखको चिठ्ठा परेको भन्दै फेसबूकबाट ७ लाख ठगी, ख्याल गर्नुस्, तपाई पनि ठगिनुहोला !
रामकृष्ण ढकालको आवाजमा उमेश रेग्मीको ‘सानु मेरो याद आयो भने..’
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार २२:१९
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार २२:००
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०९:४८
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०९:३७
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०९:२८
हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : थप १७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण…
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १९:११
लोकतन्त्रमा जीतहार निर्वाचनबाट हुन्छः मन्त्री गुरुङ
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १८:३२
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०९:४५
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०९:३६
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०९:११
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार २०:१४
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०९:१०
सिंहदरबारकै क्यान्टिनमा अखाद्य वस्तु
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०९:०४
Harke Haldar | Feb 19, 2021
What The Flop? (Feb 18, 2021)
१८ माघ २०७७, आईतवार २३:४८
Trending Now : फुटेको नेकपा मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा धेरैको चासो